To Poet – The Art Garden Rohingya
– We, The Art Garden Rohingya would like to giveaspecial thank to those poets who send poems to us.
– Our aim is to provideaplatform asanew step and encourage our Rohingya Youths who are interested in writing poetry.
– The voluntary editors provide required editorial hands for the poems sent to our page or email as their best accordingly and post it at FB page and Twitter.
– We are so sorry to let you know that we cannot consider those poems which are not enough eligible in sense of poetry characteristics.
– We, however want you to continue writing poetry in order to touch the second luck.
– For interested poets, kindly send us your poems at #theartgardenrohingyaeditors@gmail.com in text file. We are regretful to say that the poems sent to us in screenshots as well as PDF will be ignored due to inconvenience to edit it.
– We also urge you to gain poetry knowledge that the editors apply on your poem by comparing your original poem and the edited one.
– If you have any concern or question about the edition of your poem, please feel free to ask our Editorial Team what and how the editors fix the style and idea on your poem in editing.
က​လောင်​ရှင်​များသို့ အသိပေး တင်ပြခြင်း
– The Art Garden Rohingya Page သို့ ကဗျာရေးပို့လာသည့် ကဗျာဆရာ/မများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
– The Art Garden Rohingya Page ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကဗျာစာပေ စိတ်ဝင်စားသည့် ရိုဟင်ဂျာ လူငယ်များကို ဝိုင်းဝန်းအားပေးသည့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် ခြေလှမ်းအသစ်အဖြစ် platform တစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
– စေတနာဖြင့်အချိန်ပေး အယ်ဒီတာတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူများသည် Page သို့ ပို့ပေးလာသည့် ကဗျာများကို ဉာဏ်စွမ်းကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ လိုဖြည့်ပိုလျော့ တည်းဖြတ်စီစစ်ပြီး Facebook Page နှင့် Twitter တို့၌ အချိန်အခါအားလျော်စွာ တင်ပေးနေလျက် ရှိပါသည်။
– အချို့သော ကဗျာများသည် အင်္ဂါရပ်မစုံလင်သဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းခံရခြင်းမရှိသောကြောင့် တင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို အယ်ဒီတာအဖွဲ့က စိတ်မကောင်းစွာ အသိပေးလိုပါသည်။
– သို့သော်လည်း မိမိပို့ပေးသော ကဗျာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ရွေးချယ်မခံရခြင်းအပေါ် အလွယ်တကူ စိတ်ဓာတ်မကျစေလိုဘဲ ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးအတွက် ကြိုးစားကြပါရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
– ကဗျာပို့ပေးလိုသူများ အနေဖြင့် – Text File ဖြင့် Mail Address (theartgardenrohingyaeditors@gmail.com) သို့သာ ပို့ပေးပါရန် အလေးအနက် အသိပေးလိုပါသည်။ ဓာတ်ပုံပေါ်ရေးပို့လာသည့်ကဗျာများ၊ Pdf File ဖြင့် ရေးပို့လာသည့်ကဗျာများကို တည်းဖြတ်စီစစ်ရန် ခက်ခဲမှုများရှိနေကြောင်း သိစေလိုပါသည်။
– ကဗျာရွေးချယ်ခံရသူများအနေဖြင့်လည်း အယ်ဒီတာအဖွဲ့က တည်းဖြတ်ပြီး Page ပေါ် တင်ပေးသည့် ကဗျာနှင့် မိမိ၏ မူရင်းကဗျာ တို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကဗျာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
– မိမိ၏ ကဗျာများကို အယ်ဒီတာများက မည်သို့တည်းဖြတ်ခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့် လိုတိုးပိုလျော့ လုပ်ရခဲ့သည် စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုလျှင် အယ်ဒီတာအဖွဲ့သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။